लक डाउनमा बैंक खोल्न अन्यौल भयो, केन्द्र र स्थानीय सरकारको एउटै नीति होस् : सीईओ गोविन्द ढकाल | Himalaya Post
लक डाउनमा बैंक खोल्न अन्यौल भयो, केन्द्र र स्थानीय सरकारको एउटै नीति होस् : सीईओ गोविन्द ढकाल
Posted by Himalaya Post | १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १४:५२ |
गोविन्द ढकाल, सीईओ, गरिमा विकास बैंक
लक डाउनका समयमा पनि म नियमित कार्यालय गईरहेको छु । अत्यावश्यक सेवाका रुपमा हामीले हाम्रा शाखाहरुबाट ग्राहकहरुलाई सेवा दिई नै रहेका छौं । तर प्रशासनका कारण भने बैंकका शाखाहरु खोल्न अन्योलको अबस्था छ । ‘सम्भव भए सम्म’ खोल्ने भन्ने सरकारी कुराले अन्यौल भएको छ । स्थानीय सरकार र प्रशासनका कारण कहिले खोल्ने र कहिले बन्द गर्ने गर्नुपरेको छ ।
एक त ग्राहकहरुलाई शाखासम्म आउन पनि समस्या छ । सरकारको एउटै स्पष्ट नीति नहुँदा हामीलाई बैंकहरु सञ्चालन गर्न अन्यौल भएको छ ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै भनाई हुनुपर्यो लक डाउनका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनका बिषयमा । कहिले सञ्चालन गर्न दिने भन्ने अनि कहिले मिल्दैन भन्ने कुराले गर्दा अन्यौलता ल्याएको छ । यस्मा सरकार स्पष्ट हुनुपर्यो । हामी यो संबेदनशील अवस्थामा पनि ग्राहकहरुको सेवाप्रति कटिबद्ध छौं ।
अहिले बिश्वमा कोरोना भाईरसको सन्त्रास फैलिरहेको छ । यस्बाट सबै नेपालीहरु थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा प्रकोप फैलिएको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । युरोप अमेरिका जस्तो अवस्था भयो भने सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन । यस्कारण, सुरुकै अवस्थामा हामी सचेत भएर सुरक्षित रहनुपर्छ ।
कार्यालयका अलवा घरमा रहेर समाचारहरु पढ्ने, अनलाईनहरु हेर्ने, किताबहरु पढ्ने काम गरिरहेको छु । यसरी नै सबै नेपालीहरुले लक डाउनलाई पालना गर्दै आँफु सुरक्षित हुने र सबैलाई सुरक्षित बन्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । यस्का लागि सबै सचेत भएर जो जहाँ रहनु भएको छ, त्यहीँ रहेर सामाजिक दूरी राख्ने अनुशासनको पालना गनुपर्नेछ । यसमा सबै एक भएर लागौं र संक्रमणबाट बँचौं अनि सबैलाई बचाउँ ।
(विकास बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका सीईओ ढकालसंग हिमालय पोष्टले गरेको टेलिफोन संवादमा आधारित)
Previousह्वात्तै बढ्यो तरकारी र फलफूलको मूल्य
Nextमेडिकल सामग्री ल्याउन शनिबार चीन जाँदै नेपाल एयर लाइन्स
महिला सहयात्रा माईक्रोफाइनान्सको चौथो त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक
२९ श्रावण २०७५, मंगलवार १७:३६
असोज २१ देखि नयाँ नोटः कुन–कुन बैंकबाट प्रतिव्यक्ति कति पाईन्छ ?
११ आश्विन २०७५, बिहीबार ०७:५८
बालुवाटार प्रकरणबारे गगनको व्यंग्यः गोकुलधाममा गएर खड्ग उचाल्नु र विष्णु-विष्णु भन्नु !
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:२६